Koonfurta iyo woqooyiga Sudan oo mabda’ ahaan ku heshiiyey in Abyeey ay noqoto goob kacaagan hubka
Addis Ababa:-Midowga Africa ayaa sheegay in Woqooyiga iyo koonfurta Sudan ay ku heshiiyeen mabd’ ahaan in deegaanka Abyeey ee lagu muransan yahay ay noqoto goob ka caagan hubka, islamarkaana si deg deg ah loo geeyo ciidamo Ethiopian ah oo nabad ilaalin ah.
Heshiiskan ayaa yimid kagadaal kulan laba maalin qaatay ay ku yeesheen Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Albashiir iyo madaxweynaha koonfurta Sudan Silva Kiir magaalada madaxda dalka Ethiopia ee Addis Ababa oo uu garwadeen ka ahaa dhexdhexaadiyaha midowga Africa Thambo Mbaki iyo ra’iisal wasaaraha Ethiopia Meles Zinawe kaasi oo looga hadlayey xaaladda Abyeey iyo arrimo la xiriira gooni isutaaga koonfurta Sudan.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa Baarni Afaako oo ah afhayeenka guddiga sare ee midowga Africa u qaabilsan fulinta heshiiiska nabada Sudan ayaa sheegtay in labada dhinac ay mabad’ahaan ay ku heshiiyeen in deegaankaas uu noqdo goob ka caagan hubka islamarkaana lageeyo ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda dalka Ethiopia.
Dhanka kale wasiirka warfaafinta koonfurta Sudan ninka lagu magcaabo Barnaabaa Maryaal Banjamiin ayaa u sheegay idaacadda madaxa banaan ee Sudan in ay hayaan macluumaad ku aadan in lagu heshiiyey in ciidamada laga saaro Abyeey iyadoo laga hergelinayo deegaankaas maamul u gaar ah deegaanka.
Deegaanka Abyeey ayaa ah mid kamid ah baraha khilaafaadka u dhexeeya woqooyiga iyo koonfurta sudan oo ku dhawaaqi doonto madaxbaanideeda 9 bisha July ee soo socota.
QM oo sheegtay in 45% dadka ku nool marinka Gaza ay yihiin shaqo la’aan
New York:- Warbixin ay soo saartay wakaaladda gargaarka filistiiniyiinta ee hoos tagta QM ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan UNURWA ayaa lagu sheegay in tirada shaqa la’aanta ka jirta marinka Gaza ee ay ka arrimiso xamaas ay gaartay 45% waana heerka ugu saareya adduunka.
Warbixinta Wakaaladda ayaa tilmaamtay in dhibaatada dhaqaale ee kajirta marinka Gaza ay ka dhalatay go’doonka Israel ay ku hayso deegaankaas tan iyo wixii ka dambeeyey afduubkii loo geystay askarigii Israel Galcaad shaliidh sanadii 2006.
Afhayeenka UNURWA ninka lagu magcaabo Chris Gonis ayaa sheegay in tirakoobka ay sameeyeen ee ku aadan shaqa la’aanta kajirta marinka Gaza ay tahay mid xaqiiq ah islamarkaana hoos u dhigtay mushaaraadkii ay heli jireen dadka tirada yar ee ka shaqeeya deegaankaas.
Israel ayaa fududeesay go’doonkii ay ku haysay bishii July ee la soo dhaafay kadib markii ay cadaadis kala kuluntay beesha caalamka kadib markii ay ku dishay duqeyn cirka ah sagaal qof oo Turkish oo ka tirsan kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo la socday dooni kaalmo u waday marinka Gaza.
Israel ayaa ku adkeesanaysa in go’doonka ay ku hayso xamaas uu yahay mid loo baahan yahay si looga hor istaago Xamaas in ay hub iyo dhaqaale soo geliso ama ka saarto marinka Gaza balse wakaaladda gargaarka filistiiniyiinta ee hoostagta QM ayaa u aragta in taasi aysan wax saameyn ah ku yeelan awoodda Xamaas.
Eritrea oo sii deysay afar muwaadiniin British ah kagadaal dhexdhexaadin ay sameysay dowladda Qadar
London:- Dowladda Eritrea ayaa sii deysay afar muwaadiniin British ah oo lagu eedeeyey in ay ahaayeen jawaasiis, kuwaasi oo u xirnaa dowladda Eritrea tan iyo bishii December ee la soo dhaafay.
Wasaaradda arrimaha dibadda Britain ayaa xaqiijisay warka sii daynta muwaadiniinta British-ka waxayna sheegtay in ay hadda awoodaan in ay dib ugu soo laabtaan qoysaskooda iyo asxaabtooda.
Sidoo kale wasaaradda ayaa uga mahad celisay xukuumadda Qadar gacanta ay ka geysatay sidii muwaadiniinta British-ka ay xoroiyadooda dib ugu heli lahaayeen.
Afarta qof ee la soo daayey ayaa u shaqeenayey shirkad British ah oo ka shaqeysa amaanka badda, kuwaasi oo lagu qabtay biyaha Eritrea kagadaal markii ay sheegeen in ay u soo galeen biyaha Eritrea xaaladda badda oo kacsanayd awgeed iyagoo ku sii jeeda maraakiib la sheegay in kooxo burcadbadeed ah ay ku haystaan deegaanka Tashyic.
Xiriirka dowladaha Eritrea iyo Britain ayaa xumaaday kadib markii ay dowladda Britain ku eedeesay dowladda Eritrea in ay taageerto kooxaha ka dagaalama gudaha soomaaliya gaar ahaan Xarakada Shabaab.
Eritrea ayaanan u ogolaan qunsuliyadda Britain in ay la kulanto afarta qof ee la sii daayey, kuwaasi oo ay Eritrea ku eedeysay in ay wateen hub taasi oo ku qasabtay Britain in ay ka mamnuucdo dublumaassiyiinta Eritrea ee ku sugan London in ay dalka dibadda uga baxaan iyagoo aan cadayn wadan.